Abahlinzeki bephampu ye-Hydraulic Piston & Factory | China Hydraulic Piston Pump Manufacturers
Inkambu yohlelo lokusebenza: imboni yomshini wesihlangu Isingeniso somkhiqizo: ● Iphampu yochungechunge olusindayo olusebenza ngokugcwele oludlula kushafu ukuze kuzuzwe umsebenzi wesivinini esikhulu ● Ukwandisa isivinini sokukhiqiza nokunciphisa izindleko ● Ukwethembeka okuphezulu, ukucindezela okukhulu nempilo ende ukuhlangabezana nezidingo eziphezulu. -phela imishini emikhulu
Izindawo zokufaka izicelo: izinhlelo zokusebenza ezinesivinini esikhulu nezinokwethenjelwa okuphezulu njengemishini yokwakha, izinto zokusebenza zasogwini, nezimoto ezihambayo. Isingeniso somkhiqizo: ◆ Iphampu ye-axial piston ene-heavy-duty, i-high-rigidity casing kanye nepuleti lokuswayisha elibalulekile, elisetshenziselwa ukuthembeka okuphezulu okuvulekile okusebenzayo kwe-hydraulic; ► Iphampu yamandla angaguquki enesivinini esiphezulu, ilungele umshini wokudonsa amanzi ngesivinini esiphakathi nendawo; ► Isivinini esilinganiselwe esiphezulu, esilungele ukushayela ngesivinini esikhulu semishini yokwakha injini yedizili; ► Kwakhelwe ngaphakathi ...
Izindawo zokufaka isicelo: Imishini yokunyathelisa neyokukhanga ngokushesha, imishini yokunyathelisa nemishini yokukhipha amafa kanye nezinye izikhathi zesikhathi eside zokuphuma kokugeleza okungaguquki. Isingeniso somkhiqizo: ► Iphampu ye-axial piston ene-heavy-duty, i-high-rigidity casing kanye nepuleti lokuswayisha elibalulekile, elisetshenziselwa ukuthembeka okuphezulu kwemishini evulekile ye-hydraulic; ► Iphampu yokulinganisa, indawo enkulu yokufuduka, i-axial plunger enesakhiwo sepuleti lokugeza, esetshenziselwa ukuhanjiswa kwe-hydrostatic kusekethe evulekile; ► I- through shaft idlulisa i-torque engu-100%, futhi inga...
Inkambu yohlelo lokusebenza: Usayizi wokufaka nomsebenzi wokulawula uyafana, u-100% ubuyisela ngokuqondile iphampu yochungechunge lwe-“Visa” PVX yasekuqaleni, futhi esikhundleni samanye amaphampu angenisiwe, kunciphisa uhlu lwabathengi, kunciphisa izindleko, nokuthuthukisa ukwethembeka. Isingeniso somkhiqizo: ◆ Miselela ngokuqondile iphampu yochungechunge lwe-“Weiss” PVX yasekuqaleni, ukusetshenziswa okuguquguqukayo okungu-100%; ► Ngokusebenzisa i-shaft idlulisela i-torque engu-100%, ingahlanganiswa namaphampu ochungechungeni; ► Idizayini yesakhiwo esenziwe ngcono, asikho isidingo ...
Inkambu yesicelo: imboni yomshini wesihlangu Isingeniso somkhiqizo: ►Ukulawula okuvaliwe okulinganiselwe ngogesi, okufanele izidingo eziphakeme ►Ukucindezela okuphezulu nomthwalo osindayo, ukwethembeka okuphezulu, ukufuduka okukhulu, ukuhlangabezana nezidingo zomshini wesihlangu ►I-Full-through shaft, ingakwazi ukubona iphampu yochungechunge, ukunciphisa izindleko
Indawo Yokufaka Isicelo: Idinga isilawuli kude sokususwa kwemoto, isilawuli sesivinini esiguquguqukayo esingabonakali. Isingeniso somkhiqizo: ◆Ngenjini ye-piston eguquguqukayo ye-shaft, indlu eqinile kanye nepuleti lokuswayisha elibalulekile, eliklanyelwe ngokukhethekile ukudluliselwa kwe-hydrostatic kumasekhethi kawoyela avulekile navaliwe, ukugeleza okuguquguqukayo kuhambisana nesivinini, kulungele ukuguquguquka kwesivinini sokushayela; ► Injini elawula isivinini esilinganiselwe, elawulwa nge-elekthronikhi ukuze ilungise i-engeli yepuleti lokugeza, kanye nomthamo ophumayo...
Izinkambu zokufaka izicelo: imboni yokubumba, imboni yemishini kaphethiloli, imboni yensimbi, imboni yamaphepha, njll. Isingeniso somkhiqizo: ◆ Iklanyelwe ngokukhethekile umshini ovulekile we-hydraulic drive. ► Ukugeleza kwepompo kuhambisana nesivinini kanye nokugudluzwa kwepompo, futhi ukufuduka kungalungiswa ngaphandle kwesinyathelo ngokulungisa ukuthambekela kwepuleti layo le-swash. ► Iphampu ekwazi ukuzwa ukulayisha, ilungele izikhathi lapho isistimu ye-hydraulic idinga ukugeleza; ► Iphampu ye-Axial plunger ene-swash plate design,...
Izindawo zokufaka izicelo: izicelo zezimboni, izikhathi ezidinga ukulawulwa kwengcindezi. Isingeniso somkhiqizo: ◆ Iphampu ye-axial piston ene-heavy duty, igobolondo eliqinile kanye nepuleti lokugeza, esetshenziselwa ukwethembeka okuphezulu okuvulekile imishini ye-hydraulic; Iphampu ye-axial piston ene-swash plate design, ukusatshalaliswa kwendiza; ► Ngokudluliswa kwe-shaft, kokubili amaphampu angaphambili nangemuva angaxhunywa ochungechungeni ► Umsindo ophansi, umzimba wepompo olungiselelwe i-FEM kanye nezilungiselelo zegumbi lokucindezelwa ngaphambilini zinciphisa ngempumelelo izinga lomsindo; ► Ukuguquguquka okukhulu ...
Inkundla yesicelo: imishini yokwakha Isingeniso somkhiqizo: ►Ifanele imishini yokwakha kanye nezicelo zezimboni. ►Ibanga elibanzi lokulawula ukufuduka lingahlangabezana nezidingo zejubane eliphezulu netorque enkulu. ►I-Bending shaft design variable displacement motor, ilungele amasekethe avulekile navaliwe aqhutshwa yi-hydrostatic pressure.
I-B1-300 enezinkanyezi ezinhlanu
Izindawo zokufaka isicelo: imishini yokubumba umjovo, imishini yokuphakamisa i-hydraulic rotary, imishini yomgwaqo, izimoto zokususa iqhwa nezinye izinkambu. Isingeniso somkhiqizo: ◆ Injini ye-torque ephezulu enesivinini esiphansi, akukho sakhiwo sezinduku ezixhumayo, ingxenye yokushayela iyipheya eliyindingilizi e-eccentric, akukho mandla aseceleni; ► Ukusatshalaliswa kukawoyela okulingana ngokugcwele kanye nesinxephezelo, ukwethembeka okuphezulu; ► Ukusebenza kahle kokuqala kuphezulu njengo-90%, futhi ukusebenza kahle kwevolumu nokusebenza kahle kwemishini kuphezulu; ► Ijubane elincane ngu-0.5~1 ...
IHydraulic Motor A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 Rexroth A6VM
I-A6VM Hydraulic Piston Complete Motor A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 eneqembu le-axial piston rotary lomklamo we-eksisi egobile, yamadrayivu e-hydrostatic kumasekhethi avuliwe navaliwe. I-HD, i-HA, i-HZ, i-EP Controller I-motor ifaneleka kokubili izinhlelo zokusebenza zeselula nezimboni.Ububanzi obubanzi bokulawula okuguquguqukayo kwe-motor displacement ivumela ukuthi ihlangabezane nezidingo zejubane eliphezulu kanye ne-torque ephezulu.Ukuhamba kuyahlukahluka ngokungenamkhawulo ebangeni I-Vg max kuya ku-Vg min = 0.Isivinini sokuphuma silingana...